August | 2007 | The World of Pinkgold
Rememberance of Taryarminwai….
Posted on August 25, 2007 by cuttiepinkgold
ဒေါင်းအလံ ပြန်စိုက်တဲ့တစ်နေ့ငါတို့ ………. ။
ကြိုက်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်း ဆီကနေ ကော်ပီကူးလာတာပါ။ တင်မယ်နော်…
Posted on August 24, 2007 by cuttiepinkgold
လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ အသက် 30 ကျော်လာတာနဲ့ မျက်နှာမှာ အရေးကြောင်းလေးတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတတ် ကြပါတယ်။ ဒီလိုအရေးကြောင်းတွေဟာ ကျွန်မတို့ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာပြီ အိုမင်းလာပြီဆိုတာကို သတိပေးနေသလိုပါပဲ။ ဒါပမယ့် တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးနဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဖက်ရှင် အလှအပရေစီးကြောင်းကြောင့်၊ ဘယ်လောက်ပဲ အရေးကြောင်းတွေ ပေါ်လာ ပေါ်လာ ဇရာကို အန်တိုနိုင်ဖို့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာကြပြန်ပါတယ်။ ဒီလို အရေးကြောင်းလေးတွေကို သဘာဝနည်းတွေနဲ့ ကာကွယ်နိုင်သလို၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာနဲ့ ဖော်စပ်ထားတဲ့ ဆေးဝါးတွေ၊ အလှကုန်တွေလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။ Cosmetic Brand တွေမှာ Wrinkle Decrease ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မအခု ဖော်ပြပေးမှာကတော့ သဘာဝဆန်ဆန် ထိမ်းသိမ်းနည်းလေး နှစ်နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ မများသလို နေ့တိုင်းလည်း လုပ်နိုင်တဲ့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းကောင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။
• ရေစင်စင်ဆေးထားတဲ့ သခွားသီးကို အနှစ်တွေကို ခြစ်ထုတ်ပါ။ အခွံခွာ စရာမလိုပါဘူး။ ပြီးတော့ ကြက်ဥအကာ၊ mayonnaise၊ olive oil အစရှိတာတွေနဲ့ရောမွှေပြီး မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညနေတစ်ကြိမ် လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
မျက်နှာနဲ့ နဖူးပေါ်မှာ ကြက်ဥ အကာလိမ်းပေးခြင်း ဟာလည်း မျက်နှာပေါ်မှာ အရေးကြောင်းတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ ကြက်ဥအကာတွေကို မျက်နှာပေါ် လိမ်းပြီး5မိနစ်လောက် ထားလိုက်ပါ။ အရေးကြောင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နေရာတွေကို များများလိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကြက်သီးနွေး အဆင့်ရှိတဲ့ ရေလေးနဲ့ ဆေးပြီး နောက်ဆုံးမှာ ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာ သစ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
ဒါတွေကတော့ တစ်ကယ့်ကို အင်မတန် အလွန်တရာ လွယ်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေပါ။ နေ့စဉ်လုပ်သွားနိုင်ရင်တော့ အရွယ်တင်လိုက်တာ ဆိုတဲ့စကားလေးက ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။
You are tagged, I was tagged!
Posted on August 21, 2007 by cuttiepinkgold
I was tagged by Su Myat
Write 8 facts about yourself and share 8 things that your readers don’t know about you. Then at the end, you tag 8 other bloggers.
I TAGGED: Ma Ma Melody, My little brother Tayzar, Ko Nay Phone Latt,Chitthu Lay, Moe Tain,My father-in-law Myat Lone,Silver Moon and Ko Htike.
– I’m quiteatalkative girl.
– I love to read the books concerning with religion.
– I know almost everythingalittle, but master in none. (Jack of all trade, master of none)
– I enjoy living apart from my family.
– I hate snake too much.
– I’m used to devote all of my time doing things for others.
– I like singing and dancing and enjoying with my friends.
– doing home works bothers me
My Favourite5Posts….!!
မမမယ်လိုဒီမောင်က ရေးခဲ့ပြီး သမျှထဲက အကြိုက်ဆုံး 5ပိုစ့်ကို ရေးသားဖို့ တက်လိုက်တာကြောင့် ပင့်ဂိုလ်းလည်း မရမက အကြိုက်ရှာပြီး တင်ပြလိုက်ရ ကြောင်းပါရှင်။ ပင့်ဂိုလ်းရဲ့ Blog Archive ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘလောဂ့်သက်တမ်း မကြာသေးမှန်း သိသာပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေးခဲ့တာတွေကလည်း ကျွန်မရဲ့ “The World Of Physical And Mental Beauty” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်အောင် selection ရွေးပြီး ရေးထားတာတွေမို့ အားလုံးလိုလိုကလည်း ရွေးစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ပင့်ဂိုလ်းနဲ့ စာဖတ်သူ အကြိုက်ချင်းတူတဲ့ ပိုစ့်လေး5ခုကို အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
1.The Rules Of BeingaHuman
စတဲ့ ငါးခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။